जेलमा १६१ बालबालिका ! मन्त्री भन्छन्–बालगृहबाट धर्म प्रचार – Rajdhani Daily
जेलमा १६१ बालबालिका ! मन्त्री भन्छन्–बालगृहबाट धर्म प्रचार
प्रदेश ३ का विभिन्न जिल्लामा रहेका जेलमा १६१ जना बालबालिका कैदीबन्दीसँगै रहेका छन् । विभिन्न बालगृहमा ११ हजार ८८२ बालबालिका आश्रित छन् ।
प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो । सबैभन्दा बढी बाल सुधार गृह सानो ठिमी भत्तपुरमा १४७, काठमाडौं कारागारमा ८ , धादिङ कारागारमा ३ र चितवन कारागारमा ३ बालबालिका छन् ।
विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेका अभिभावकसँगै संरक्षणकर्ताको अभावमा बालबालिका पनि कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । ११ वटा जिल्लामा आवासीय रूपमा सञ्चालित बालगृहमा ११ हजार ८८२ जना बालबालिका बस्ने गरेका छन् । तर, यी गृहहरू संरचनागत रूपमा बालमैत्री नभएको दाबी गरिएको छ । बालगृहको मापदण्डमा नरहेका भनिएका बालगृह पनि समस्यामा विकल्पका रूपमा मात्र लिइएको छ ।
११ जिल्लामा ४१५ वटा बालगृह राखेर धर्म प्रचारको काम समेत हुने गरेको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले बताए । बालबालिकाका अधिकार कुण्ठित गरेर राखिएका बालबालिकालाई सरकारले जिम्मा लिएर राख्ने तयारी गरेको दुलालले बताए । ‘बालगृहबाट संरक्षणका नाममा धर्म प्रचारको काम भएको पाएका छौं । अब प्रदेश सरकारले बालबालिकाको संरक्षणको काम गर्छ,’ दुलालले भने, ‘बालगृह बन्द गर्ने कानुनी बाटो बलियो नभएका कारण सरकार मौन बस्नुपरेको छ । परिणाम आउने गरी काम गर्ने तयारी थालेका छौं ।’
प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अहिले हेटौंडा सडक बालकमुक्त र मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरूलाई सडकमा भेट्न नसकिने अवस्थामा रहेको दाबी गरे । ‘बालबालिकाको क्षेत्रमा अब एक्सनमा जाने हो । रिजल्ट निकाल्ने काम सुरु हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘तीन वर्षभित्र बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा गर्नेछौं ।’
प्रदेश ३ का कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले आफू अहिले बालबालिका संरक्षणार्थ कस्तो कानुन निर्माण गर्ने भन्नेबारे अध्ययनमा रहेको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक वर्षदेखि कानुन पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ ।